Ogwe Ezinaụlọ Queen Bed
Zitere anyị email Kpọtụrụ ugbu a
Nzaghachi ugbu a
N'izugbe, ihe anyị na-ewepụta oge iji chee bụ otu esi achọta akwa nkpuru dị mma. Otú ọ dị, onye ọ bụla zụta akwa akwa na-ekwenye na mkpa ọ dị na-ewekarị oke mbọ. Na-eche ihu ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke arịa ụlọ na-ahụ anya, ekwesiri ilebara otutu echiche anya. N'ezie, maka akwa bed, ụdị ndị ahụ dị ọtụtụ dị ka akwa si nha ruo na ihe. N'ihi ya, ma ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ ma ọ bụ na ọ na-esiri gị ike ikpebi nke onye kwesịrị ịbụ onye mbụ oke otú, kedu ka esi muta ihe eji edozi akwa a?
Isi eze nwanyị na-edozi isi isi ya bụ nkwupụta okwu zuru oke ka etinye ya na ime ụlọ ọ bụla nwere ụdị dị iche iche. Agba ntụ na-acha odo odo ọmarịcha mmaji mara mma na njiri mara mma na-eme ka ọ mara mma ma na-echebe. Ugwu a na-emechi emechi emebere anya mara mma ma mara mma nke dabara adaba n'ụzọ zuru oke na kpochapụla azụ tufted na isi. Ahịrị skeleton na-akwado akwa ụra gị. Mbadamba osisi ndị gbara ya gburugburu nwere ike idozi matraasi na isi. Urakwụ ụra na-adịgide adịgide na nke mara mma na-emepụta ihe eji emepụta maka ọdịdị dị iche iche na-aga nke ọma na ọtụtụ ụdị na mmasị. Ihe niile ịchọrọ ngwa ngwa na ngwa ngwa ịwụnye akwa akwa a na-etinye n'ime ogige. Gbọ mmiri ngwa ngwa na n'enweghị nsogbu n'ime otu igbe, ikike gị nkwakọba.
.Dị: Ngwongwo ụlọ, Ime ụlọ
Ihe onwunwe: Akwa; Ahịa;
Ọdịdị: Ngwongwo nke oge a
Aha ngwaahịa: Akwa akwa eze jiri isi mee ihe
Nọmba nlereanya: BF-AU01-04
Ihe mkpuchi: Akwa
Ọrụ: Na-eri nri Bed bed
Akụkụ(cm): 137L * 190W
Mbukota size(cm): 139L * 192W
Ibu ibu: 80KGS
Oge mmepụta: 30-45ụbọchị
Usoro ahia: FOB
Kwụ Tergwọ Okwu: T / T, 35% nkwụnye ego, edozi tupu nnyefe
Mbukota: Extra Ike mbukota
Akwụkwọ ikike: 2 afọ akwụkwọ ikike maka n'ime Ọdịdị, 1 afọ aniline na elu ọka akpụkpọ anụ
Akwụkwọ: ISO9001; SGS;
1~ 3: EPE na-ekpuchi gburugburu sofa
46: Fụfụ corrugated kaadiboodu wrapping na nkuku
7~ 8: Akwụkwọ katọn na-ekpuchi sofa, tinyere ala
9~ 12: Elu oyi akwa na-abụghị kpara.
Q: You bụ onye nrụpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
A: Anyị bụ ndị a n'ichepụta isi maka upholstery ngwaahịa kemgbe 1985.
Q: Ebee ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị?
A: Anyị dị na Shunde, Obodo Foshan, Mpaghara Guangdong, China
Q: Gịnị bụ gị mgbe-sales ọrụ?
A: Anyị nwere otu na otu mgbe ire ere. Ọ bụrụ na mmebi ọ bụla site na njem ma ọ bụ nke dị mma, anyị ga-achọpụta ihe ngwọta ma nye gị nzaghachi.
Q: Kedu ihe bụ MOQ gị?
A: Anyị MOQ bụ 40HQ ma ọ bụ 20GP(Enwere ike itinye ego ọzọ), ị nwere ike ịgwakọta ngwaahịa dị iche iche iji jikọta 40HQ ma ọ bụ 20GP.
Q: Nwere ike ngwaahịa gị gafere ule maka ụlọ ọrụ nkwari akụ?
A: Anyị nwere ahụmịhe bara ụba maka ọrụ ụlọ nkwari akụ na ihe niile nwere ike ịgafe nkwụsị ọkụ dịka CA117, BS5852, BS7177, BS7176, na E0 / E1.
Q: Kedu ihe bụ isi ọrụ gị?
A: Anyị na-emepụta Sofas, Sofabed, Matarasị, Ndị na-emegharị ahụ, na Oche.
Q: Enwere m ike ịhọrọ agba?
A: Eeh, anyị nwere ọtụtụ agba ịhọrọ site na ihe dị iche iche dị ka Top ọka akpụkpọ anụ, Ịkwanyere, Enwere ike, ma ọ bụ akwa.
Q: Kedu oge nnyefe?
A: Ozugbo anyị natara nkwụnye ego ahụ, ọ nwere ike were ụbọchị 30 ~ 35.
Q: Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ?
A: Usoro ịkwụ ụgwọ ga-abụ FOB na ọdụ ụgbọ mmiri SHENZHEN. T / T, 35% nkwụnye ego, edozi tupu nnyefe.
Q: Have nwere ngwaahịa ngwaahịa?
A: Mba, anyị bụ OEM na ODM emeputa, ngwaahịa niile ahaziri maka ndị ahịa anyị.
Q: Ndi ulo oru mmeputa nwere ike inye onu ahia?
A: Anyị nwere ike izipu akwa ma ọ bụ akpụkpọ anụ ka ị zitere gị ozugbo. The ODM ngwaahịa ga-ebubo na sample ego mgbe 10 inyocha PC ga-eweghachi ego nlele.
Q: Kedu ihe bụ akwụkwọ ikike nke ngwaahịa gị?
A: Akwụkwọ ikike nke sofas bụ 2 afọ maka ime ụlọ, 1 afọ maka akwa akpụkpọ anụ; Matarasị bụ 10 afọ maka nhazi usoro.